Muxuu sameeyay Roberto Firmino taas oo ka careysiisay?
Roberto Firmino ayaa feejignaan galiyay carada jamaahiirta Liverpool kadib markii uu ku amaanay ninka ay dhalashada wadaagaan ee Richarlison geesinimadiisii ​​kulankii Everton ee Liverpool.
Everton ayaa soo gabagabeysay 22 sano oo ay sugeysay kulanka Merseyside Derby ee ka dhacaya Anfield ka dib guushii 2-0 ee Sabtidii.
Richarlison ayaa dhaliyay goolka furitaanka 3 daqiiqo ee ciyaarta wuxuuna ku hogaamiyay Everton guul lama filaan ah oo ay ka gaareen deriskooda oo si liidata u difaacday horyaalka Premier League.
Guushan ayaa ahayd tii ugu horaysay 23 kulan oo ay ciyaartay iyada oo Everton ay 40 dhibcood la wadaagtay Liverpool oo kaalinta lixaad ku jirta isla markaana kulan baaqi u yahay.
Ciyaarta ka dib, Richarlison ayaa soo dhigay sawirro uu ugu dabaaldegayo goolkii uu ka dhaliyay Liverpool bartiisa Instagram-ka, isagoo sawir la mid ah ka qaaday weeraryahanka Liverpool Roberto Firmino.
Labada nin ayaa saaxiibo ah marka ay u wada ciyaarayaan xulka qaranka Brazil, laakiin go’aanka xiddiga Liverpool ee uu ku taageeray goolkii Richarlison ee kooxdiisa ayaa ka careysiisay taageerayaasha Red.
Liverpool waxay ku jirtaa xaaladoodii ugu xumeyd tan iyo 2002 waxayna halis ugu jirtaa inay seegaan afarta koox ee ugu sareysa, iskaba daa inay difaacdaan horyaalka kulanka ay wajahayaan Manchester City.
“Harry Maguire waa in laga reebo xulka England” – Rio